ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး: cbox သည် ဘလော့ဂါ တယောက်ရဲ့ အားဆေး..?
CBOX သည် ဘလော့ဂါတယောက်ရဲ့ အမှတ်တရခြေရာလေးတွေ ဖတ်ပြီးကျေနပ်နေရတဲ့နေရာလေးပါ။ တနည်းအားဖြင့် ရောက်လာသူများရဲ့ ရေးသွားခဲ့တဲ့စာသားလေးတွေကို ဘလော့ ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ CBOX ဆိုတဲ့နေရာကို အရင်ကြည့်ခဲ့ကြတာ ဘလော့ဂါတိုင်းရဲ့ အကျင့်ဗီဇ တခုပါ။ သို့သော် cbox မှာရေးထားလိုက်ကြသည်များကတော့ ဘလော့ရောက်လာသူတွေများကို အာမေဋိတ်များဖြစ်ရလောက်အောင် ရေးခဲ့ကြသည်လည်းရှိ၏။ မိမိကိုယ်တိုင်တခါတရံ မထင်မှတ်ပဲ မလိုလားမှုတွေရဲ့အောက်မှာ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ သီးခံစိတ်ထားခဲ့သော်လည်း ခန္တီစ မနိုင်လို့သီးခံရခြင်းသည်လား..? မနိုင်ခြင်းဟာ မတွေ့မြင်ရခြင်းပင်တည်း။ မိမိဝါသနာအရ သိသင့်တာလေးတွေ အမှတ်တရရေးပြီး လူမရောက်နိုင်တဲ့နေရာ စာလေးတွေတော့ရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး မည်သူကိုမျှမပုတ်ခတ်ပဲ မိမိသိတဲ့တစိတ်တဒေသလေးတွေကို သိစေလိုသော သမ္မာဆန္ဒလေးတွေနဲ့ရေးသားခဲ့ပါသည်။ မိမိအလုံးစုံမသိပါ။ ဘုရားမှတပါးအလုံးစုံမသိနိုင်ပါ။ မိမိ ၀ါသနာအရရေးလာခဲ့သည်မှာ ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။ မည်သူကို ထိခိုက်စေလိုသော စာအရေးသားတခုမှ မပါအံ့ဟု ထင်မိခဲ့ပါသည်။ ရိုးသားစွာဝန်ခံအပ်ပါ၏။ စာရေးဆရာမဟုတ်ပါ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနေစဉ် အမှတ်တရလေးတွေ ပြည်ပရောက်ရွှေမြန်မာများလဲ သိစေလိုသော ဆန္ဒလေးတွေနဲ့ရေးလာခဲ့ပါ၏။ cbox သည် မရှိလည်းမကောင်းရှိလည်းမကောင်း ဟု ဆိုရပေမည်။ BHU တက္ကသိုလ်မှ မိမိသူငယ်ချင်းပြောပြဘူး၏။ ဘိုးသီ တဲ့ CBOX ဆိုတာ မရှိတာအကောင်းဆုံးတဲ့။ မိမိ ဒီ cbox ကြောင့် ဘလော့တခုလုံးဖျက်စီးချင်စိတ်ထိ ပေါက်မိ၏။ တခါတရံ cbox မှ အမှတ်တရ ရေးထားတဲ့စာလေးတွေကို ဖတ်ပြီး ပီတိဖြစ်မိသည်။ ခုလို ဆဲလား ဆိုလား ဆိုသည့် ဘလော့လာရောက်သော သူများသည်ထဲမှ မိမိအား အင်တာနက်မှတဆင့်ပြောပြမှသိခွင့်ရရှိ၏။ မိမိခုတလော ဘလော့ ဘက်မရောက်တာအတော်ကြာခဲ့ပြီ ။ ခု ဘလော့ဖွင့် CBOX ကြည့်မိသည် အိုး. မိမိသည် အရူးဟု ပြောဆိုသမုတ်ထား၏။ ပြောခြင်တာတွေလဲပြောကြပါစေ။ မိမိသည် ပုထုဇဉ် တယောက်ဖြစ်သည်။ ပုထုဇဉ်မှန်သမျှ အရူးချည်းမို့ စိတ်ဖြေရာတခုနဲ့ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်လိုက်ပါသည်။ အရူးသည် အကောင်းအဆိုး အကြောင်းအကျိုးကို ခွဲခြားသိတတ်၏။ မိမိဘလော့ရောက်လာသူများ အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ လို့ ဆန္ဒပြုပေးမိသည်။ မိမိဘလော့ရောက်လာသူအထဲမှ မိမိအား အရူးလို့ပြောဆိုသသူသည် သူတော်ကောင်းစိတ်ဓါတ်မွေးမြူနိုင်သူ နောက်နောင်ဖြစ်ပါစေလို့ မိမိ ဓမ္မေခစေတီတော်နားအရောက် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးလိုက်ပါ၏။ မိမိ စိတ်မကောင်းရုံမှလွဲပြီး ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါ။ မြတ်စွာဘုရားကိုသော်မှ မကျေနပ်သူ, တိုက်ခိုက်သူတို့သည် ရှိခဲ့ဘူး၏။ မိမိသည် သာမန်ရဟန်းတပါးမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ပုထုဇဉ်ဖြစ်ပါသည်။ အမှားများတွေ့လာခဲ့သော် ပြောပြနိုင်ပါ၏။ ပြင်ဆင်ဘို့ ၀န်မလေးပါ။ တလောကလည်း ပရဟိတလုပ်ငန်းလုပ်နေသော အရှင်မြတ်တပါးသည် မိမိသည် ခု ချိန်ထိ စာသင်နေသည် သေခါနီးနေပြီဟု အပြစ်တင်ကာ သူ၏ ပရဟိတတွေ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း အောင်မြင်နေကြောင်း မိမိ၏ cbox ထဲမှာ ရေးသွားခဲ့သည်။ မိမိသည် ပရဟိတလုပ်ငန်းလုပ်ဘို့နေနေသာသာ မိမိနေထိုင်ဘို့ရာကို အတော်လုံးပန်းနေချိန်ဖြစ်နေပါ၏။ ရိုးသားစွာဝန်ခံအပ်၏။ ပရဟိတလုပ်မှသာ သာသနာပြုရာရောက်ပါသည်လား.ဟု မေးမြန်းခြင်ပါ၏။ သို့သော် မိမိလည်း တချိန်တုံးက ပရဟိတလုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့ဘူးသည်။ မြို့ကြီးပြကြီးလိုနေရာမဟုတ်ခဲ့။ သူပုန်တွေရှိတဲ့ တောင်တန်းတနေရာမှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူး၏။ အို စာဖတ်သူအပေါင်းတို့ .မိမိ၏ ဤဘလော့စာမျက်နှာမှာ သူများမကောင်းကြောင်း အရူးဆန်ဆန် ပြုမူမှုများတွေ့ရှိခဲ့သော် မိမိ ဘလော့တနေရာမှာမေးရှိပါ၏။ ပြောဆိုနိုင်ပါ၏။ “ တဒဟု ပ ဗ္ဗဇိတော သန္တော ဇာတိယာ သတ္တ၀ဿိကော သောပိ မံ အနုသာသေယျ သ မ္ပဋိစ္ဆာမိ မတ္ထကေ” ၇ ရက်သားလေးပင်ဖြစ်ပါစေ မိမိအားအပြစ်ပြပြီး သွန်သင်ခဲ့သူရှိပါအံ့ ဦးထိပ်၌ ပန်ဆင်ကာ ၀န်ခံပါမည်။ မိမိသည် သာမန်ရဟန်းတပါးဖြစ်ပါသည်။ အရူးဆိုသည့်အသုံးနှုန်း ပိုင်ရှင်အား ဤ post ဖြင့် အပြစ်ပြပြောဆိုခဲ့သော် ဦးထိပ်၌ ပန်ဆင်လျှက်ပါလို့...
Posted by ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး at 11:54 AM